Iyada oo ay dunida a kumanyaal 2D video files, waa jiito weyn kuwa funs warbaahinta qoon gaystay in ay la kulmaan soo baxna cusub-movies 3D ee shineemada. Waxaana mahad kuwa soo saarayaasha Qalabka telefoonada gacanta la qalabkii ay 3D, waxaana haatan la heli karo in ay leeyihiin waayo-aragnimo masrixiyada ku 3D guriga! Waa hagaag, dhibaato waa ay jiraan in yar oo 3D video files bixisey online iyo offline taas oo runtii na ka dhigaysa hoos. Haddaba maxaad Abuurin filimada 3D ula 2D video files nafteena by? Waxa ay u muuqataa sida shaqo arrin adag, laakiin daacad ah ma at dhan. Waa wax fudud si loogu badalo video in 3D haddii aad leedahay Converter xirfadle 3D si ay u caawiyaan. Iyo qodobkan waa qoranyahay gaar u caawinaya in si fudud loo abuuro filimada 3D la 2D video files saddex tallaabo.
Qaado 2D in 3D MKV diinta tusaale ahaan. Sida files 2D, 3D videos sidoo kale waxay leeyihiin qaabab file sidii MKV, MP4, wmv iyo AVI. Halkan tagaa talaabada hagitaan talaabo talaabo ah 2D in ay diinta ka 3D MKV. Marka hore kala soo bixi 3D cajiib ah Video Converter Ultimate oo abuurtaan. Waa muuqaal ah xalka kama dambaysta ah ee diinta video oo dhan qaabab file caan ah oo ay ka mid yihiin 2D in ay diinta ka 3D:
1. Ku dar 2D videos in 2D in ay Converter 3D MKV
Waxaad la siiyaa saddex hab oo ay ku darto files u 2D si ay hawsha 3D MKV:
a. Si toos ah jiidi & hoos u 2D video in qaab kasta oo ay u 2D in ay Converter 3D MKV
b. madaxa si "Beddelaan" markaas dooran "Add Files"
c. riix badhanka dar in ay leeg- tahay tan app ee
Iyada oo shaqo ee diinta Dufcaddii, halkan waxaa loo ogol yahay in ay aad u soo dhoofsadaan ka badan hal files 2D mashruuca abuuray movie 3D aad.
2. Dooro 3D MKV sida qaab wax soo saarka aad
Ku dhowaad dhammaan caanka ah qaabab wax soo saarka 3D waxaa lagu bixiyay liiska qaabka 2D in ay Converter 3D MKV. Si loo fududeeyo 2D in ay diinta ka 3D MKV, Waxaad dooran kartaa qaabka wax soo saarka 3D MKV sida ay baahidaada. Tusaale ahaan, waxay dooran haddii aad is leedahay Anaglyph koob 3D red-cyan, ma qalab gaar ah ama software ciyaaryahan warbaahinta u baahan; ama doorato haddii bandhigay 3D aad isticmaala hab madoobaad ama farsamooyinka kale 3D.
By jidkii, Video Converter Ultimate this intaa siisa qaar ka mid ah hawlaha edit muhiim u ah in aad si kor video markaas waxaad ka heli kartaa madadaalo ka wanaagsan 3D muuqaal ah. Si aad u hesho info ka faahfaahsan, waxaad tagi kartaa: hage user ee Video Converter Ultimate .
Fiiro gaar ah : Si aad u badan oo ku saabsan bartaan farqiga u dhexeeya video Anaglyph Red / Cyan 3D iyo Side-by-Side 3D ​​video , waxaad riixi kartaa link muddo ka info.
3. Start si loogu badalo 2D in 3D MKV
Hit badhanka ee "Beddelaan" markaas Converter 3D MKV toos ah ku dhameysan doono inta ka dhiman aad u. Ka dib markii in, waxaad samayn kartaa ciyaari video 3D si xor ah oo wuxuu ku raaxaysan gaar ah noloshaada digital la yaab leh!
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan 2D in 3D MKV fudayd